Baaritaan shaki badan dhaliyay oo lagu sameynayo shaqaalaha kala duwan ee hay’adaha dowladda – Bandhiga
War qoraal ah oo ka soo baxay Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee xukuumadsa Somalia ayaa lagu shaacisay in baaritaano cusub oo la xiriira dhinaca amniga lagu sameynayo dhammaan shaqaalaha kala duwan ee dowladda.
Sii hayaha Wasiirka Shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Xirsi Warfaa ayaa sheegay in shaqaalaha DFS baaritaano amni lagu sameyn doono, si loo hubiyo macluumaadkooda saxda ah, isla markaana lala yeelan doono wareysiyo.
Saraakiisha Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa qoraalka lagu sheegay iney baaritaanka ku sameeyn doonto shaqaalaha oo laga codsaday inay la shaqeeyaan. lamana oga waxa baaritaankan sababay iyo tuhunka jira.
Lama oga ujeedka saxda ah ee Baaritaankan balse wararka ayaa sheegaya in qaar kamid ah shaqaalaha dowladda Booska lagu badali doono kuwa kale.